Duullaanka Dumarkeena Beegsanaya! | Maankaab.com
Duullaanka Dumarkeena Beegsanaya!
Dumar badan ayuu saameeyay duullaanka maskaxeed ee lagu hayo gabdhaha muslimaadka ah, tafahana looga bixiyay hardanka iyo tartanka ka dhexeeya labada jinsi ee labka iyo dheddiga ee dhulalka Gaallada. Qaar badan ayaa looga yidhi in shaqada Islaamku siiyay haweenayda ee u qoondeeyay tahay dib-dhac iyo arrin ay tahay in laga xoroobo. Iyadoo, sida taariikhdu qorayso, la wada ogyahay in sababta is-feedhyaaca ragga iyo dumarka ee Galbeedka ay keentay dumarkii oo loogu maaro waayay inay la shaqeeyaan warshadahii iyo goobihii shaqada, ka dib markii raggii ku le’day dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee Adduunka (Waa siday yidhaahdaane). Middan ayaa waxay keentay in haweenaydii guryaha laga soo saaro, loogana dhigo in xornimo la helay, guriga oo ay joogtaana ay tahay guumaysi uu raggu ku hayo. Saasoo ay tahay, waxaa jiray dumar badan oo kasoo horjeestay in dumarka guriga laga soo saaro, waxayna si cad u sheegeen in dumarka loogu talo galay inay hooyooyin noqdaan, shaqadooduna ay tahay hawsha hoose ee guriga.
Intaa loogama hadhin dumarkii, ee waxaa la gaadhsiiyay inay maryaha tuuraan, si ay ragga wax ula qaybsadaan. Waxaad arkaysaa nin iyo naag wada socda oo ninkuna si fiican oo asturan u lebisan yahay tan haweenayda ahina ay mudh maryo gashan tahay!
Waxyaabaha la yaabka leh ee dumarka lagu lumiyo waxaad xattaa ka dheehan kartaa, adigoon meel kale isku qaadin, qoladan dharka iyo naqshadahahu’qaadashada xayaysiisa. Bal u fiirso inta badan ninku wuxuu wax ku xayaysiiyaa dhar tin iyo cidhib qarinaya oo xattaa laga yaabo in madaxana uu koofiyad saartay. Dumarka, si taa lid ku ah, dharka ay wax ku xayaysiiyaan waa mid qaawan oo qaawanaan ah, haweenkana ugu yeedhaya inay is qaawiyaan, mid waliba waxay bannaynaysaa, ama muujinaysaa faydaysaana meeshii ay isleedahay ishu way qabanaysaa.
Waddamo badan oo galbeedka ah ayaa markii ay arkeen dayaca iyo baaba’a uu ku sugan yahay qoyskii iyo sida ay tarbiyaddii caruurtu meesha uga sii baxayso waxay olole xoogle leh ugu jiraan sidii ay dumarka guryaha ugu celin lahaayeen.
Arrinkaasi wuxuu muujinayaa inay ogaadeen in aanay haweenku helayn shaqo u dhaanta midda uu Alle u gartay oo ah shaqada guriga iyo korinta caruurta. Oo xaggeebay la helayaan Isagaaba Xakiim ahoo shay walba meeshii ku habboon dhigaye!
Haweenay macallimad ah oo Galbeedka u dhalatay ayaa dood mawduucan ku saabsan u furtay ardaydii ay wax baraysay. Wiil Muslim ahaa oo ardayda ka mid ahaa ayaa u sharaxay shaqada uu Islaamku u dooray gabadhdha, ka dib waxay macallimaddii dooddii kusoo gabagabeeysay in ay ogtahay in haweenkoodu laba shaqo qabtaan. “Raggayagu waxay nagu xantaan inaanu laba shaqo qabanno, middii debadana waanu qabanaysaa tii gudaha iyo gurigana waanu ku qasbannahayba, illeen waa shaqo aanu raggu nagula tartami karine, waanan ognahay in caruurtayadii faraha ka baxeen.” Ayay tidhi. Cabbaar intooy yara aamustay ayay intay yara qososhay, iyadoo isku qancinaysa, tidhi ‘ Laakiin shaqadaa dheeraadka nagu ah waxaanu dhaafsiisannay oo ku bedelannay xornimo,” Iyadoo la wada ogyahay in reerku ku dhisan yahay labada waalid, ayaa haddana waxaa jira oo aan cidna caad ka saarnayn hawlo uu Alle mid walba goonidiisa ugu fududeeyay. Waxaa inta badan ragga loo duwaa oo nasiib loo siiyaa hawlaha dhibka iyo halista badan ee muraqa, maskaxda iyo kartida bandanna u baahan, illeen iyagaa ka bixi karee. Halka dumarkana loo xulo lana amro inay ku foofaan hawlaha guriga, oo inkastooyna xoog u baahnayn, haddana la xaqiijiyay in iyaga keliyaatii ay u babac dhigi karaan taasina ay tahay xirfad ay ragga dheer yihiin, cid aan iyaga ahayna aanay ka bixi karin. Jidh ahaan iyo dabeecad ahaanba waxa labada jinsi Alle u dooray hawl ku munaasib ah.
Galbeedkan ay haweenkeennii sharafta lahaa ka daba-dhaceen eek u daba lumen ayaa haweenkoodii waxgaradka ahaa waxay ku doodayaan in ragga iyo dumarku aanay isku hawl ahayn. Waxay qaarkood soo saareen bayaan ay ku caddaynayaanbin raggu hawsha guud leeyahay iyo cadawga ooy la dagaalamaan, illeen haweenay hoobiye ma ridi kartee, dumarkuna ay hawlaha hoose ee guriga, labadaa hawloodna ay yihiin kuwo lagama maarmaan ah. Iyagoo shaqadooda ku qanacsan, ceebaalna aan u arkayn, ayay si cad u sheegeen inaanay, dumarku, jidh ahaan iyo dabeecad ahaanba aanay mas’uulliyadda dalka qaban karin. Waxay isku difaaceen in aanay hoos-isu-dhigid ahayn in dumarku aanay qaban karin hawsha guud, waayo waxaa jirta hawl ay iyaku qaban karaan ase aan raggu tahli karin, waa shaqada gurigee. Sannadkii 1970kii ayaa isu-soo bax balaadhani ka dhacay caasimadda Denmark.
“Waan diidnay inaan noqonno alaab, waan diidnay inaan noqonno alaab ganacsi… Wannaagayagu waa inaan jikada ku jirno.
Waxaan rabnaa haweenaydu inay guriga joogto. Nagu celiya dumarnimayadayadii!”
Baaqaas waxaa ku dhawaaqayay tiro aad u badan oo ah dumarka iyo hablaha jaamacadaha dhigta mar ay banana-bax ku qabteen magaalada Koobanheegan (Copenhagen – Denmark).
Afti loogu magac daray “Nabad gelyo casrigii Xorriyada; Soo dhawoow casrigii Dumarnimada” ayaa laga qaaday dumarka Faransiiska, 90% (Sagaashan boqolkiiba) waxay ku cod bixiyeen inay jecel yihiin, inay intooy guursdaan, guryahooda jogaan. Waxay yidhaahdeen
“Waan ku daalnay sinnaan raadintii, waan ku daalnay dhibkan hadh iyo habeen na haysta ee taagan, waan ku daalnay hiraabtan aan kallahayno iyo tareen caydhsiga. Waanu ku daalnay noloshan aanu ninku xaaskiisa arkayn waqtiga hurdada mooyaane, hooyaduna aanay caruurteeda is arkyn miiska qadada mooyaane!”
Waa wax la isku waafaqsan yahay hawl aan la kala lahayn oo aan kala soocnayn isla markaana xayndaab iyo xad kala lahayn la’aanteed inaanay dadkeenu guul iska daaye geedkaa muuqda gaadhayn. Sidaa darteed ayuu Islaamku u booriyay, cid walbana uu u dooray halka ay ku habboon tahay.
Waxyaabah la yaabka leh ee ay isku qanciyeen isla markaana ay isugu sheekeeyaan gabdhaha muslimaadka ah ee qurbaha joogaa waxa weeye inay ku andacoonayaan in dalkii lagu soo cabiidsan jiray isla markaana ay hadda – Markii ay gaalada u yimaadeen – ay heleen xuquuqdii ka maqnayd. Arrinkan waxaa usii kaba-geliyay isla markaan sii karaariyay oo aad usii buunbuuniyay wadamadan loo qaxay oo iyaga danahoodu yihiin la dagaallan diineed iyo inay kala furfuran qoyska Muslimka ah ee iswata.
Gunaanadkii, walaashayda muslimadda aheey diinta Islaamku waxay kuu garatay inaad noqotid mid loo adeego oo fadhiga loogu shaqeeyo, halkii aad ka noqon lahayd mid lagu adeegto. Adigay kuu taalaa inaad kala dooratid go’aankii Alle iyo go’aankii mid caasiyay Alle oo a gaaloobay.
WQ: Cabdicasiis Mahdi Axmed “Guudcadde”
E-mail: muslim.guudcade@hotmail.comHargeysa, Somaliland.
1. Woman against the vote, 182,258
C/qaadir Cabdile Diini.- Tarankii Qurbaha tegay